MUCAARIS (ILMO SOO RIDID) EE LO'DA: SABABTA AY U DHACDO, SIDA LOO GO'AAMIYO WAXA LA SAMEEYO - XOOLAHA
Xayawaanka beeraha waxaa loo adeegsadaa oo keliya faa'idada. Waxyaabaha tayo sare leh, ee la xaqiijiyay waxay ku farxaan miiska mulkiilayaasha, laakiin sidoo kale jeebka. Dhab ahaantii waa sababtaas awgeed khasaare soo gaadhay natiijo ka dhalatay dhacdooyin aan fiicneyn ayaa keenaya dhibaatooyin badan beeralayda.
Gaar ahaan cilladaha dhiciska ah ee lo'da. Maxay tani u dhacaysaa iyo sida looga hortago dhibaatadan, waan kuu sheegi doonaa.
Waa maxay dhicis
Ilmo iska soo rididdu waa joojinta hore ee geedi socodka uurka, taas oo ka timaadaa sababo kala duwan ee cudurada wadnaha ee hooyada jidhkiisa, shuruudo aan fiicnayn oo dayactir ah ama cunto tayo wanaagsan leh.
Waa muhiim! Qiyaastii 5-35% ee uurka oo ku jira qaansarrada dhiciska.
Kiisaska ilmo soo rididda cudurada waxaa inta badan lagu arkaa xilliga dayrta iyo xilliga qaboobaha, taasina waxay keeneysaa koritaanka cudurada faafa, cunto xumo, jahawareer la'aan iyo xayiraad dabiici ah.
Badanaa, joojinta qasab la'aanta ee uurka waxay dhacdaa qiyaastii 5-6 bilood. Tani waxay keenaysaa dhibaatooyinka caafimaad ee xayawaanka iyo inta badan in la sii dheeraado, daaweyn qaali ah ama xataa dhimasho. Waxaa jira noocyo badan oo ah dhicin, kuwaas oo lagu kala duwan yahay etiology iyo isha, taas oo keentay xaaladan.
By nooca ilaha
Marka la eego nooca sababta keentay in ilmo iska soo ridid, waxaa jira laba kooxood oo waaweyn:
Calaamado muujinaya. Marka uurka la joojiyo sababtoo ah xaaladda hooyada. Tusaale ahaan, jidhka lo'du uma dulqaadan karo saamaynta isirrada kala duwan iyo dhicisku wuxuu dhacay.
Idiopathic. Waxay ku xiran tahay xaaladda uur-kujirka. Tusaale ahaan, haddii wax khaldan lagu sameeyo horumarka embriyaha (anomalies congenital, deformities, iwm), ka dibna hooyada jidhkeeda waxay diidaysaa uurjiifka.
Ma taqaanaa? Cows ayaa ah xayawaanka beeraha ugu wax soo saarka leh. Sannad kasta waxay soo saari karaan 1000-8000 litir oo caano ah, bakhtigu wuxuu ka kooban yahay 200-600 kg oo hilib ah.
Sida laga soo xigtay etiology
First of dhan, dhicin ku dhaco la buuxa ama qayb ka lumo ilmaha caloosha. Sidaa darteed, ilmo soo rididdu waxay u qaybsan tahay:
buuxa - dhammaan embriyaha waxay u dhintaan;
dhammaystirnayn - ugu yaraan hal miro ayaa noolaan kara.
Marka la eego xaaladaha asalka ah, ilmo iska soo rididdu waxay u qaybsan tahay saddex nooc:
Akhri ku saabsan uurka uurka: sida loo ogaado muddada uu soconayo iyo sida xayiraadda xayawaanka xilligaas.
Sifeynta dheeraadka ah waxay kuu ogolaaneysaa inaad ogaato sababaha ilmo iska soo ridida iyo caawinta sameynta go'aan sax ah oo ku saabsan daaweynta xayawaanka. Sidaas awgeed, ilmo soo rididda ayaa loo qaybiyaa:
Idiopathic aan lahayn cudurka. Waxay ku dhacdaa natiijada anomalies ama pathologies ee horumarinta embriyaha. Kuwani waxay noqon karaan cudurada kelyaha, beerka, wadnaha, iyo xubnaha kale ee muhiimka ah. Astaamaha ayaa laga soocaa noocyadan. Waxay sababtaa xiriirka hooyada iyo uurjiifka. Noocaan waxaa ka mid ah qummanaanta, cimilada, cuntada iyo sunta.
Dhibaatada cudurka ee faafa. Waxay dhacdaa haddii cudurku ku dhaco lo'da leh cuduro kala duwan (leptospirosis, listeriosis, brucellosis, campylobacteriosis, salmonellosis). Calaamadaha calaamadaha muuqda waxaa laga helaa qaaxada, cagaha iyo afka, mycosis.
Cudurka macluusha. Waxay ku dhacdaa toxoplasmosis ama trichomoniasis. Calaamadaha calaamadaha muuqda waxay ka yimaadaan cudurada dhiiga.
Soo ogow calaamadaha iyo qaababka daaweynta leptospirosis ee lo'da.
Sababaha dhicin ee lo'da
Sababaha ugu weyn ee ilmo-soo--jeedinta waa calaamadaha soo socda:
Cudurrada faafa (brucellosis, trichomoniasis, iwm.). Xayawaan jirran, infekshanku wuxuu ku faafaa embriyaha wuxuuna joojiyaa horumarka. Xaaladdan oo kale, uur-jiifku waxa kale oo uu noqdaa mid faafa, sidaa daraadeed ka dib marka dhicisku dhaco, barniga waxaa lagu daaweeyaa jeermis-dileyaasha, iyo lo'da lafteedu waa la lumay.
Marka trichomoniasis ee lo'da ah, uurjiifku wuxuu sidoo kale ku dhici karaa inuu ku dhaco oo uu dhinto
Cudurrada kala duwan ee infekshanka ama neef-mareenka. Xubno kala duwan ayaa la saari karaa: mareenka neefta, mareenka caloosha iyo mindhicirka, habka wareegga, iwm.
Dhibaatooyinka ka dhalatay dhalmada hore (dib u dhac ku yimid kadib, endometritis). Xilliyaddan, sharafta lafdhabarka muruqyada ee ilmo-galeenka ayaa dhibta, taas oo ay sabab u tahay meydadka ay noqdaan kuwo daciif ah oo aan fiicnayn. Sababtani waa kuwa ugu caansan. Waxaa intaa dheer, dhicin-marisku wuxuu dhacaa marxalad kasta oo isku xiga oo isku mar ah - 5-6 bilood. Lo'da kuwan dambe looma isticmaali karo cidlo.
Cunno tayo fiican leh. Mucaawooyin badanaa waxay ku dhacaan marxaladaha hore.
Ba'an ama miisaan culus. Tani waxay keenaysaa in yaraanta quudinta, ama xadiga xad-dhaafka ah ee diirada iyo isku darka miraha ee cuntada. Xaaladaha noocaas ah, difaaca xayawaanka ayaa hoos u dhacaya iyo u nugulaanta caabuqyada sii kordhaya. Isla mar ahaantaana, dheef-shiid kiimikaadka waa la buuqayaa, taas oo keenta ilmo iska soo ridid.
Baaqid la'aanta cuntada ee unugyada macdanta (calcium, zinc, birta, fosfooraska). Beeralayda waaweyn sababtoo ah, dhicin badan ayaa dhicin kara. Xaaladdan, beeraleydu waa in ay falanqeeyaan isugeynta nuujinta waxayna hagaajineysaa.
Ma taqaanaa? Xitaa 30-40 g oo ah jilicsan ama lafaha ayaa kaa caawin doona ka hortagga soo rididda iyo badbaadinta caruurta mustaqbalka.
Bar la'aanta borotiinka ayaa si xun u saameeya horumarka embriyaha.
Faytamiin A yaraanta. Waxay keentaa in ay sii xumaato unugyada epithelial, taas oo aysan ku jirin mandheerta iyo epidermis. Miisaariyadu waxay inta badan ku dhacaan marxaladaha hore. Iyadoo maqnaanshaha 'retinol', lo'da ayaa midho u qaadi karta, laakiin dhalashada ka dib ma sii jiri karto mudo dheer. Sida caadiga ah, weylaha noocan oo kale ah waxay si xun u sameeyeen hababka neefsashada iyo dheef-shiidka.
Nasiib daro. Badanaa waxay dhalinaysaa ilmo soo ridid ​​qarsoodi ah, kaas oo ilmaha caloosha ku jira ama la nuugo. Haddii aad xayawaanka xayawaanka dib ugu soo celiso, waxay awood u yeelan doontaa inay mustaqbalka sameyso caruur caafimaad qaba.
Yaraanta Vitamin E. Iyada oo la'xaad la'aanta dhicitaanku waxay dhacaan muddo 6-7 bilood ah. Marka maqnaanshaha fitamiinkan la ogaado, daaweynta multivitamin isla markiiba waxay bilowdaa.
Dhaawacyada. Inta badan, dhulka oo ku dhufo, garaacid "qabiillo" leh gees iyo xaalado kale waxay keeni karaan ilmo iska soo ridid.
Cabitaanka biyo aad u qabow. Marka tani dhacdo, istiraatiijiyeyaasha xasaasiga ah ee xididdada dhiigga, oo keena gaajada oksijiinta iyo dhimashada ilmaha caloosha. Heerkulka biyaha ee ugu wanaagsan biyaha la cabbo waa ilaa +10 ° C.
Dhibaatooyinka hidda-socodka ee uur-ku-jirta. Waxay ku dhacdaa shakhsiyaad mana u horseedayso qaybinta qaansiirka kale. Iyadoo ay sabab u tahay waxyeelo aan caadi ahayn, embriyaha ayaan awoodin inay horumaraan, oo lo'duna way ka baxdaa.
Diiqada kuleylka. Waxay sidoo kale saameyn kartaa hawlaha taranka. Sababta ma'aha.
Joogitaanka walxaha sunta ah ee quudinta. Waxay keenaysaa ilmo iska soo ridid ​​labadaba hore iyo mar dambe. Qeybta hoose ayaa ah in dhirta ama quudinta ay jiraan Nitrate iyo nitrit, taas oo saameyn ku yeelan karta koorsada uurka. Sababtoo ah sababaha keena dhicinta waxay dhacdaa xilliyo goor dambe.
Sida loo go'aamiyo in lo'da uu leeyahay dhicis
In la aqoonsado in ilmo soo ridid ​​ilmo soo ridid ​​ma aha wax adag. Si loo go'aamiyo dabeecadda faafa ee ilmo soo rididda, waxaad u baahan tahay inaad la socoto calaamadaha soo socda:
dhicin waxay dhacdaa isla mar ahaanteed tiro badan oo ah lo'da ee isku beer ama isku mid;
ilmo iska soo rididdu waxay ku dhacdaa dhammaan xayawaannada waqtiyada lagu sharxay;
on baaritaanka uurjiifka, shaati ka daboolaya waxaa la daboolay ubax huruud ah, oo u eg muuqaalka kalluunka masago ah;
ka dib marka dhicisku dhaco dib u dhac ku yimaada kadib.
Kala-joojinta lafteeda waxay si fudud u dhacdaa, iyada oo aan loo baahnayn waxyaabo gaar ah, iyo xoolo-beereed aan si aan caadi ahayn u helin si khalad ah u hela barnka la tuuro, badanaa dhintay, uurjiifka. Ka dib ilmo soo rididda xayawaanka laga soo bilaabo galka dhalmada, dheecaan mucopurulent wasakh ah ayaa la sii daayaa, taas oo faafisa.
Waa muhiim! Haddii ay tahay cudur la isqaadsiiyo, markaa waxay ku sii jiri kartaa beerta sanado badan iyo daaweynta badankeeda ma shaqeyneyso. Si looga hortago caabuqyada xayawaanka la tallaalay.
Inta badan saddexda bilood ee ugu horeeya ee uur-ku-jirta ee uur-qaadida lama ogaanayo. Calaamaduhu waxay horey u muuqdaan taariikh dambe. Astaamaha Muhiimka ah:
hoos u dhigidda nuujinta;
isbedelka astaamaha tayada caanaha;
xayawaanka aan nadiifka ahayn, candho xoolo barar ah;
xayawaanku wuxuu leeyahay walaac, isku day;
soo bandhigida kanaalka ilma-mareenka, waxaa jira dheecaan dhiig-wasakh leh.
Natiijada luminta luminta
Cawaaqibta ilmo iska soo rididdu way ka duwanaan kartaa. Xaaladaha qaarkood, Dibiga waa la badbaadin karaa, marmarka qaarkoodna waa inaad badbaadisaa lo'da lafteeda.
Baxniintii oo dhammayd
Diidmada buuxda ee uurjiifka dhintay waa nooca ugu badan ee dhicin. Badanaa waxay dhacdaa 3-5 bilood uurka. Kansarka waa la eryey ka dib 1-3 usbuuc, iyada oo aan lahayn calaamado qallafsan.
Ku saabsan dhimashada uurjiifku waxay leedahay calaamadahan:
uurjiifka ma guurto;
lo'da waxay leedahay colostrum;
ee haweenka caanaha, dhalidda caanaha ayaa hoos u dhacda.
Ogow waxa sababa iyo sida loo daaweeyo dhalmo la'aanta ee lo'da.
Xaaladahan oo kale, daryeelka waa in la qaataa si buuxda u-saaro uur-jiifka iyo in lagu daweeyo dhibaatooyinka iman kara.
Dhimashada Embryo iyo dhibaatooyinka
Natiijada noocan oo kale ah waxay ka dhalataa cawaaqib xumo jirka hooyada.
Kondhomka ayaa lagu diley ilmo-galeenka (waxa loogu yeedho ilmo iska-soo-ridid ​​qarsoodi ah) oo kala-soocid, iyo alaab-dhimistu waxay ku soo baxaan jirka. Isla mar ahaantaana, luteum corpus ee ugxanku wuxuu sii wadaa inuu sii wado illaa dhammaadka nudaha ugu dambeeya ee unugyada embriyaha iyo xuubyadiisa. Natiijo ahaan, dib u dhac ku yimid dib u soo celinta wareegyada galmada, taas oo ugu dambeyntii keeni karto joojinta hore ee uurka. Haddii embriyaha uu ku dhinto 11-13 maalmood ka dib, heerka cabsida wareegga jinsiga wuxuu kordhiyaa 17-25 maalmood.
Badanaa, ilmo soo ridid ​​qarsoon ayaa lagu sameeyaa dib-u-eegis, 2-3 bilood kadib, ogeysii calaamadaha uur hore oo la sameeyey.
Waxaa jira xaalado diidmo ah ilmaha caloosha ku jira (seed). Hawlgalku wuxuu u egyahay sida dhalmada: Dhammaan dhismaha ama inta ugu badan ee gabbaad-bixiyaashu waa la arkay.
Waa muhiim! Haddii qashinka lagu daboolo dhogor, waxaa jira fursad ah inay soo baxdo. Laakiin waa in ay tixgelisaa sababta ilmo dhicis ah (faafa ama aan faafin).
Dibiga ayaa si dhakhso ah u qalajiyey, oo loo wareejiyey qol diiran oo heerkul ah + 25-30 ° C, daboolay buste oo lagu duudduubay kuleyliyaha. Waxay ku quudiyaan keliibka iyo caanaha hooyada oo kululeynaya heerkulka jidhka. Haddii caanaha hooyada aan la isticmaali karin, waxay raadinayaan kubka kubka.
Waxaa lagu talinayaa in lagu daadiyo dhiiga hooyada ee caloosha. Haddii qofku uusan qabin nuugid nuugista, ma shaqeyn doono. Si kastaba ha noqotee, isugeynta caanaha (markaad beddeleysid caanaha xayawaanka kale) waa inay kudhowaan waalidka.
Si loo baabi'iyo foosha ka hor inta aan suurtagal ahayn, waa inaad raacdaa xeerarkan:
Ugu dambeyn 60 maalmood ka hor dhalmada, lo'da waxaa laga soocaa daaqada oo u ordaa qoryo dhintay. Beeraha waaweyn waxaa loo oggol yahay in ay sameystaan ​​koox ka mid ah lo'da uurka leh, laakiin aan ka badnayn 25 xayawaan kasta.
Ka hor intaanad u wareejin xayawaanka sariirta meel kale, si fiican ayaa loo mayraa oo jeermi loo nadiifiyaa.
Ka hor inta aan dabiici ahayn, bacda ayaa laga tallaalayaa brucellosis iyo qaaxada. Nidaamkan waxaa la sameeyaa bil ka hor inta aan loo baahnayn.
Xayawaanka ayaa loo xiraa si looga hortago dhaawaca.
Nafaqada si adag loo ilaaliyo. Waa in lagu dheellitiraa oo ku jiraa qadar ku filan fitamiino iyo waxyaabo faa'iido leh.
Si joogto ah, ilaa 2-3 saacadood, socodka lo'da. 3-4 maalmood kahor socodka dhalmada ayaa joojiya.
Isla mar ahaantaana, lo'da waa in la nadiifiyaa, gogosha diiran, heerkul aan ka yarayn +16 ° C. Isla markaasna xakamee microclimate ee barn. Haddii ay jiraan siyaabo kala duwan oo loo yaqaan 'nitrogen, carbon dioxide', xayawaanku waxay kobcin karaan cudurrada sambabada, taasoo horseedi karta ilmo soo ridid.
Waa muhiim! Si looga hortago dhicin, waa inaad baabi'isaa dhammaan qodobada keeni kara.
Haddii uurku ka dhaco xagaaga, markaad xajinayso, waa inaad daawataa iyada. Cawska qoyan, tiro badan oo dhirta suuban waxay u horseedi kartaa cunto badan. Xaaladdan, tympania, xannibaadda mindhicirrada iyo dhibaatooyinka kale ee mareenka caloosha iyo mindhicirka ayaa laga yaabaa inay soo baxaan. Cudurada noocan oo kale ah waxay keenaan ilmo soo ridid.
Ma suurtogal in ilmo iska soo ridid ​​loogu talagalay lo'da
Ilmo soo rididda dabiiciga ah ayaa si dhif ah loo adeegsadaa dhaqaatiirta caafimaadka xoolaha. Si taas loo sameeyo, xayawaanka waa inuu lahaadaa tilmaamaha soo socda:
cidhiidhiga iyo curvature ee kanaalka miskaha leh horumarinta qolof iyo buro;
baaxad leh, caado-dhiig-daba-gal ah;
joojinta xuubka uurjiifka;
"Laba" oo ah dabeecada dhalashada;
Daahitaanka jidhka hooyada ee uurka leh;
osteomalacia iyo hababka kale ee neefta ee saameeya uurka ama foosha.
Si loo sameeyo ilmo soo rididda macmalka ah, waxaa jira dhowr habab oo shaqeynaya iyadoo la isticmaalayo kicinta farsamooyinka ama kuleylka ilmagaleenka.
Ma taqaanaa? Celcelis ahaan, lo'da waxay uur leedahay 285 maalmood. Xaaladdan, taariikhda saxda ah ee dhalmada waa mid aan suurtagal ahayn in la go'aamiyo, maaddaama uurka uu ku kala duwanaan karo 240 ilaa 38 maalmood.
Soo-ururinta, waxaan jeclaan lahaa inaan ogaado in daryeellada lo'da inta lagu jiro uurka, abuurista xaalado raaxo leh oo iyaga loogu ilaalinayo infekshannada waxay u oggolaanayaan inay helaan carruur caafimaad qaba. Ha ilaawin inaad si joogta ah u baartid xayawaanka joogitaanka calaamadaha tooska ah iyo kuwa aan tooska ahayn ee ilmo soo rididda.